စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အခုအချိန်မှာ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေရပါပြီ
5 Oct 2018 . 5:46 PM
ပေါ်တူဂီ နာမည်ကျော်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ဟာ အခုအချိန်မှာ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေရပါပြီ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခံနေရတဲ့ စီရော်နယ်လ်လို ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတစ်ဦးအတွက် လက်ရှိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ အရာအားလုံးကို လက်လွှတ်ရနိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာပါပဲ။ သူ့ကို စွပ်စွဲထားသူက အသက်(၃၄)နှစ်အရွယ် ကက်သရင်းမာယော်ဂါ Kathryn Mayorga ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက Las Vegas မှာရှိတဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ မုဒိန်းကျင့်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီး ဂျာမန်မဂ္ဂဇင်း Der Spiegel ကို ဖွင့်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုကတော့ ဒီ စွပ်စွဲချက်တွေကို ငြင်းဆန်ထားပြီး သူ့ရဲ့ နာမည်ကျော်ကြားမှုကို အသုံးချချင်လို့ ဂွင်ဖန်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။ အရင်ဦးဆုံး ကက်သရင်းမာယော်ဂါအကြောင်းကို အကျမ်းဖျဉ်း ပြောချင်တယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက မာယော်ဂါဟာ အသက်(၂၅)နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးပြီး တက်သစ်စ မော်ဒယ်လ်တစ်ဦးပါ။ သူမဟာ Las Vegas က Palms Casino Resort မှာရှိတဲ့ Rain နိုက်ကလပ်မှာ အလုပ်လုပ်နေစဉ်အချိန်။ သူမနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို စတွေ့ခဲ့တာက အဲဒီကလပ်မှာရှိတဲ့ VIP အခန်းထဲမှာ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက စီရော်နယ်လ်ရဲ့အသက်က (၂၄)နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။
အောင်မြင်ကျော်ကြားမှု၊ ငွေကြေး အရာအားလုံးပြည့်စုံနေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ဆိုတော့ သွေးကလည်း ခပ်ကြွကြွပေ့ါ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ မာယော်ဂါနဲ့အတူ တွဲကပြီးနောက်မှာ မာယော်ဂါနဲ့သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးကို သူ့နေတဲ့အခန်းထဲ လိုက်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ သူတောင်းဆိုချက်က သင်းပါတယ်။ ” Las Vegas ရဲ့ ရှုခင်းအလှတွေကို ခံစားကြရအောင်”ပါတဲ့။
အခန်းနံပါတ်က 57306 ။ Palms Resort မှာရှိတဲ့ VIP တွေအတွက် သီးသန့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ အခန်းတွေထဲက တစ်ခု။ အဲဒီအခန်းရှေ့က လသာဆောင်မှာ Bath Tub တစ်ခုရှိပြီး မာယော်ဂါ ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုက ရေချိုးခိုင်းတော့ မာယော်ဂါဟာ သူမမှာ အ၀တ်ပိုမပါလို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပေမယ့် ကြိုတင်စီစဉ်ထားပုံရတဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အ၀တ်အပိုတစ်စုံ ပေးပြီး အ၀တ်လဲဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပြန်တယ်။ အခန်းထဲမှာ အ၀တ်လဲနေတုန်း စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ မာယော်ဂါ ငြင်းဆန်နေတဲ့ကြားက အလိုမတူဘဲ မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသိစိတ်ပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုက သူ့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို တောင်းပန်ခဲ့ပြီး သူဟာ (၉၉)ရာခိုင်နှုန်း လူကြီးလူကောင်းဖြစ်ပေမယ့် ကျန်တဲ့ (၁)ရာခိုင်နှုန်းကတော့ မသေချာဘူးလို့ ပြောခဲ့တယ်။ ပြောချင်တာက သူဟာ အခုလုပ်ရပ်ကို ပုံမှန်အသိစိတ် ခဏလွတ်သွားလို့ ကျူးလွန်ခဲ့တာဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။
ဒီပြစ်မှုက ထောင် ကျနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုက ချက်ချင်းပဲ နှုတ်ပိတ်ခ ပေါင်(၂၈၇၀၀၀)ပေး၊ အခုအဖြစ်အပျက်ကို ဘယ်သူမှ မပြောပဲနေဖို့ ညှိတော့တာပဲ။ မာယော်ဂါဟာ အဲဒီ စီရော်နယ်လ်ဒိုဘက်က ညှိနှိုင်းမှုကို လက်မခံခဲ့ရင် စီရော်နယ်လ်ဒိုတို့ဘက်က ပြန်တုံ့ပြန်မှာလည်းဆိုး၊ သူမကလည်း မထင်မရှားမော်ဒယ်လ်တစ်ဦးဖြစ်လို့ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ မယှဉ်ရဲ့လို့ သဘောတူခဲ့ရတယ် ။ မာယော်ဂါရဲ့ ရှေ့နေကတော့ သူ့အမှုသည်ဟာ ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်ခဲ့ရပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေဖို့အထိတောင် စဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဆိုခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းနှစ်အတွင်း လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ အောင်မြင်လာတဲ့ #MeToo movement အစီအစဉ်ကို တွေ့ ခဲ့ရပြီးနောက်မှာတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ လူမဆန်မှုကို ဖွင့်ချဖို့ မာယော်ဂါ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါပဲ။ #MeToo movement ဆိုတာက တဏှာမုဆိုးတွေရဲ့ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့သူ အမျိုးသမီးတွေ ရင်ဖွင့်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုပါ။
စီရော်နယ်လ်ဒို ရှေ့နေက မာယော်ဂါကို မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး၊ နှစ်ဦးသဘောတူ ဖြစ်ခဲ့တာလို့ တုံ့ပြန်ထားတာကြောင့် မာယော်ဂါနဲ့ ဖြစ်ခဲ့တာကို မငြင်းတဲ့ သဘောဖြစ်နေတယ်။ အခုဆိုရင် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဒီသတင်းကို ဖွင့်ချခဲ့တဲ့ Der Spiegel သတင်းစာကိုလည်း တရားစွဲဖို့ စီစဉ်နေပြီ။ မာယော်ဂါ ဖွင့်ချခဲ့သလို စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ တကယ်ပဲ မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် စီရော်နယ်လ်ဒိုဘက်က တုံ့ပြန်ခဲ့သလို နှစ်ဦးသဘောတူဖြစ်ခဲ့တာလား၊ ဘယ်သူမှန်လဲ၊ ဘယ်သူမှားလဲဆိုတာ အဖြေတစ်ခု ထွက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတော့တယ် . . .
စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ မာယော်ဂါ အတူတွဲကခဲ့တဲ့ ရုပ်သံဖိုင်ကြည့်ရန် လင်ခ့်
ပျေါတူဂီ နာမညျကြျောကစားသမား စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ဟာ အခုအခြိနျမှာ ဂုဏျသိက်ခာအတှကျ တိုကျပှဲဝငျနရေပါပွီ။ အမြိုးသမီးတဈဦးကို မုဒိနျးကငျြ့ခဲ့တယျလို့ စှပျစှဲခံနရေတဲ့ စီရျောနယျလျလို ကမ်ဘာကြျောဘောလုံးသမားတဈဦးအတှကျ လကျရှိပိုငျဆိုငျနတေဲ့ အရာအားလုံးကို လကျလှတျရနိုငျတဲ့ အခွအေနတေဈခုနဲ့ ရငျဆိုငျနရေတာပါပဲ။ သူ့ကို စှပျစှဲထားသူက အသကျ(၃၄)နှဈအရှယျ ကကျသရငျးမာယျောဂါ Kathryn Mayorga ဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးတဈဦးပါ။ ၂၀၀၉ ခုနှဈတုနျးက Las Vegas မှာရှိတဲ့ ဟိုတယျတဈခုမှာ မုဒိနျးကငျြ့ခဲ့ပါတယျဆိုပွီး ဂြာမနျမဂ်ဂဇငျး Der Spiegel ကို ဖှငျ့ခခြဲ့တာဖွဈပါတယျ။
စီရျောနယျလျဒိုကတော့ ဒီ စှပျစှဲခကျြတှကေို ငွငျးဆနျထားပွီး သူ့ရဲ့ နာမညျကြျောကွားမှုကို အသုံးခခြငျြလို့ ဂှငျဖနျတာဖွဈပါတယျလို့ ခပျကွမျးကွမျး တုံ့ပွနျခဲ့တယျ။ အရငျဦးဆုံး ကကျသရငျးမာယျောဂါအကွောငျးကို အကမျြးဖဉျြး ပွောခငျြတယျ။ ၂၀၀၉ ခုနှဈတုနျးက မာယျောဂါဟာ အသကျ(၂၅)နှဈအရှယျသာ ရှိသေးပွီး တကျသဈစ မျောဒယျလျတဈဦးပါ။ သူမဟာ Las Vegas က Palms Casino Resort မှာရှိတဲ့ Rain နိုကျကလပျမှာ အလုပျလုပျနစေဉျအခြိနျ။ သူမနဲ့ စီရျောနယျလျဒို စတှခေဲ့တာက အဲဒီကလပျမှာရှိတဲ့ VIP အခနျးထဲမှာ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက စီရျောနယျလျရဲ့အသကျက (၂၄)နှဈပဲရှိသေးတယျ။
အောငျမွငျကြျောကွားမှု၊ ငှကွေေး အရာအားလုံးပွညျ့စုံနတေဲ့ လူငယျတဈယောကျဆိုတော့ သှေးကလညျး ခပျကွှကွှပေ့ါ။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ မာယျောဂါနဲ့အတူ တှဲကပွီးနောကျမှာ မာယျောဂါနဲ့သူမရဲ့ သူငယျခငျြးတဈဦးကို သူ့နတေဲ့အခနျးထဲ လိုကျဖို့ တောငျးဆိုခဲ့တယျ။ သူတောငျးဆိုခကျြက သငျးပါတယျ။ ” Las Vegas ရဲ့ ရှုခငျးအလှတှကေို ခံစားကွရအောငျ”ပါတဲ့။
အခနျးနံပါတျက 57306 ။ Palms Resort မှာရှိတဲ့ VIP တှအေတှကျ သီးသနျ့သတျမှတျထားတဲ့ အခနျးတှထေဲက တဈခု။ အဲဒီအခနျးရှကေ့ လသာဆောငျမှာ Bath Tub တဈခုရှိပွီး မာယျောဂါ ရောကျလာတဲ့အခြိနျမှာ စီရျောနယျလျဒိုက ရခြေိုးခိုငျးတော့ မာယျောဂါဟာ သူမမှာ အဝတျပိုမပါလို့ ငွငျးဆနျခဲ့ပမေယျ့ ကွိုတငျစီစဉျထားပုံရတဲ့ စီရျောနယျလျဒိုဟာ အဝတျအပိုတဈစုံ ပေးပွီး အဝတျလဲဖို့ တောငျးဆိုခဲ့ပွနျတယျ။ အခနျးထဲမှာ အဝတျလဲနတေုနျး စီရျောနယျလျဒိုဟာ မာယျောဂါ ငွငျးဆနျနတေဲ့ကွားက အလိုမတူဘဲ မုဒိနျးကငျြ့ခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ အသိစိတျပွနျဝငျလာတဲ့အခြိနျမှာ စီရျောနယျလျဒိုက သူ့ရဲ့ လုပျရပျကို တောငျးပနျခဲ့ပွီး သူဟာ (၉၉)ရာခိုငျနှုနျး လူကွီးလူကောငျးဖွဈပမေယျ့ ကနျြတဲ့ (၁)ရာခိုငျနှုနျးကတော့ မသခြောဘူးလို့ ပွောခဲ့တယျ။ ပွောခငျြတာက သူဟာ အခုလုပျရပျကို ပုံမှနျအသိစိတျ ခဏလှတျသှားလို့ ကြူးလှနျခဲ့တာဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျပါပဲ။
ဒီပွဈမှုက ထောငျ ကနြိုငျတဲ့အခွအေနဖွေဈတာကွောငျ့ စီရျောနယျလျဒိုက ခကျြခငျြးပဲ နှုတျပိတျခ ပေါငျ(၂၈၇၀၀၀)ပေး၊ အခုအဖွဈအပကျြကို ဘယျသူမှ မပွောပဲနဖေို့ ညှိတော့တာပဲ။ မာယျောဂါဟာ အဲဒီ စီရျောနယျလျဒိုဘကျက ညှိနှိုငျးမှုကို လကျမခံခဲ့ရငျ စီရျောနယျလျဒိုတို့ဘကျက ပွနျတုံ့ပွနျမှာလညျးဆိုး၊ သူမကလညျး မထငျမရှားမျောဒယျလျတဈဦးဖွဈလို့ စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ မယှဉျရဲ့လို့ သဘောတူခဲ့ရတယျ ။ မာယျောဂါရဲ့ ရှနေ့ကေတော့ သူ့အမှုသညျဟာ ဒီဖွဈရပျကွောငျ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ထိခိုကျခဲ့ရပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သတျသဖေို့အထိတောငျ စဉျးစားခဲ့ဖူးတယျလို့ ဆိုခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ အခုနောကျပိုငျးနှဈအတှငျး လူမှုကှနျရကျတှမှော အောငျမွငျလာတဲ့ #MeToo movement အစီအစဉျကို တှေ့ ခဲ့ရပွီးနောကျမှာတော့ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ လူမဆနျမှုကို ဖှငျ့ခဖြို့ မာယျောဂါ ဆုံးဖွတျလိုကျတာပါပဲ။ #MeToo movement ဆိုတာက တဏှာမုဆိုးတှရေဲ့ သားကောငျဖွဈခဲ့သူ အမြိုးသမီးတှေ ရငျဖှငျ့တဲ့ လုပျဆောငျခကျြတဈခုပါ။
စီရျောနယျလျဒို ရှနေ့ကေ မာယျောဂါကို မုဒိနျးကငျြ့ခဲ့တာ မဟုတျဘူး၊ နှဈဦးသဘောတူ ဖွဈခဲ့တာလို့ တုံ့ပွနျထားတာကွောငျ့ မာယျောဂါနဲ့ ဖွဈခဲ့တာကို မငွငျးတဲ့ သဘောဖွဈနတေယျ။ အခုဆိုရငျ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ဒီသတငျးကို ဖှငျ့ခခြဲ့တဲ့ Der Spiegel သတငျးစာကိုလညျး တရားစှဲဖို့ စီစဉျနပွေီ။ မာယျောဂါ ဖှငျ့ခခြဲ့သလို စီရျောနယျလျဒိုဟာ တကယျပဲ မုဒိနျးကငျြ့ခဲ့တာလား၊ ဒါမှမဟုတျ စီရျောနယျလျဒိုဘကျက တုံ့ပွနျခဲ့သလို နှဈဦးသဘောတူဖွဈခဲ့တာလား၊ ဘယျသူမှနျလဲ၊ ဘယျသူမှားလဲဆိုတာ အဖွတေဈခု ထှကျလာတော့မှာဖွဈပါတော့တယျ . . .
စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ မာယျောဂါ အတူတှဲကခဲ့တဲ့ ရုပျသံဖိုငျကွညျ့ရနျ လငျချ့